MUSLIMIINTA K/AFRICA OO KUBIIREY MALAAYINKA KAMUDAAHARADEY AFLAGADADII NABI MOHAMED (S.C.W)
“Mudaaharadyada oo kakaladhacey Capetown & Pretoria”
Pretoria: muslimiin tiradooda laguqiyaasey laba iyo toban kun oo qof (12,000) ayaa isugusoobaxey Magaaloweynta Capetown khamistii (9 Feb), muslimiintan oo aad ugacadheysan fadeexada Jariirarada Jyllands-Posten ee Denmark kasoobaxdaa, ugeysatey Rasuulkeenii Suubanaa (S.C.W), Mudaaharadkan oo werwer geliyey dowlada K/Africa oo kabaqsaneyd in rabshado kahaloosmaan, ayaa uu dhacey sinabadgelyo leh.
Banaanbaxayaasha oo kulabisnaa qamiisyo iyo xijaab ayaa kudhawaaqayey ereyada ey kamidyihiin “Denmark hadhacdo”, iyo “halaqaadaco badeecada Denmark”. Waxaa banaanbaxayaasha Capetown kamid ahaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo tirobadan.
Madaxweynaha Mbke ga K/Africa oo maalinkii khamistii guriga golayaasha ee K/Africa ka jeedinayey qudbadii qaranka ayaa sheegey “sawirada la iskukhilaafsanyahey ayaa abuurey in la-iskudheelitiro xuquuqul qowlka iyo xuquuqda diinta oo labaduba ey kucadahey dastuurka K/Africa” ayuu yidhi madaxweyne Mbeki. Waxa Mbeki uu codkiisa raaciyey Xoghayaha Q.Midoobey Koffi Annan iyo hogaamiyaasha caalamka oo kacabsi qabey in ey rabshado kaabuurmaan. Mbeki wuxuu u direy Jaraa’idka daabacey sawirada lagucaayayo Nabi Muxamed (S.C.W) in ey raali gelinkale siiyaan muslimiinta.
Banaanbax kale ayaa isna kadhacey Magaaloweynta Pretoria Jicmhii shaley ahaa (10th feb), muslimiin gaadhaya ilaa kun qof (1000) oo kakalayimid magaaloweynta Johannesburg & Pretoria ayaa iyana banaanbaxyo kahorsameeyey Safaarada Denmark kuleedahey wadankan K/Africa ee Pretoria. Inkastoo culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee Johannesburg aaney kasooqeybgelin mudaaharadkan, hadana waxaa kaqeybgaley dhalinyaro tirobadan oo sifirfircooni ey kudheehantahey ugaqeybqaatey.
Labada banaanbax ee Capetown & Pretoria waxey ugudbiyeen memorandum safiirka Denmark u fadhiya K/Africa Mr.Brylle, safiir Brylle oo kaqaadey culumada ugudbisey memorandumka ayaa sheegey in uu u gudbindoono dowladiisa, dhowaana ey jawaab siindoonaan.
Dhinacakalena Jaraa’idka Usbuuclaha ah ee Sunday Times ee usbuucii inadhaafey ayaa faalo kaqorey sawiradaa, arinkan oo keentey in Jar’aaidkaasi laqaadaco, jaraa’idka kale ee Mail & Guardian ayaa isna cadadkiisii Jimcihii Shaley ahaa qorey sida sawirada lagu aflagaadeyey Nabi Muhamed (S.C.W) ey caalamka ugilgileen, laakiin maamulka Mail & Guardian waxey kabixiyeen raali gelin, Jar’aaidka Sunday Times wuxuu shir layeeshey Dalada Culu maa u diinka K/Africa (Jamatul Ulumaa), halkaas oo ey kaqaadeen cunoqabateyntii lagusoorogey.
Muslimiinta K/Africa waa muslimiin tiro ahaan kayar 3% ee 46 malyuun ee qof ee kudhaqan wadankan K/Africa, hadana Muslimiinta K/Africa waxaa lagutilmaamaa Muslimiin tiroyar laakiin tayo fiican.
JARAA’IDKII DAABACEY SAWIRADA EE JYLLANDS-POSTEN.
Jaraa’idka Jylland-Posten ee Denmark oo sawirada Nabi Mohamed (S.C.W) daabacey September 2005kii ayaa sheegtay in daabaceyso sawiro kale oo uu kumuujinayo xasuuqii Hitler uu u geystey Yuhuuda dagaalkii 2aad ee aduunweynaha si uu utusiyo muslimiinta in aanu jaraa’idkoodu dhinacna u xaglineynin, laakiin arinkani ma dajinayaa shucuurta muslimiinta caalamka oo sida aad ka usareysa ugacadhootey jar’aaidka?.